ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ခေတ်ရှေ.ပြေးဟောကိန်းများ။(၁) « ကုရ်အာန့် သုတ - Quranic Knowledge Blog - Weekly Articles
December 15th, 2009 by U Soe Lwin
In Quranic Knowledge, Tags: advance, prophecy, quran Tweetမွတ်စလင်မ်များသည် ကမ္ဘာတွင် ကံအကောင်းဆုံးသော သူများဖြစ်ကြသည်။ အ ဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်၊ ၎င်းတို့ထံတွင် အလွန်တရာမျှ ခေတ်ရှေ့သို့ အမြဲဦးဆောင်လျှက် ရှိနေသော တုနှိူင်းမဲ့ ကိုးကွယ်ရာအရှင်၏ ခေတ်မှီလမ်းညွန်ကျမ်းကြီး ရှိနေသောကြောင့် ပင်။ ထိုလမ်းညွန်ကျမ်း၏ အမည်မှာ ကုရ်အာန်ဖြစ်သည်။ထိုကျမ်းကို တုနှိူင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာ အရှင်က တမန်တော်မုဟမ္မဒ် (အရှင်မြတ်၏ ငြိမ်းချမ်းမှုနှင့် မင်္ဂလာ အဖြာဖြာ ကျရောက် ပါစေ။) ထံသို့ ဗျာဒိတ်အဖြစ်ချပေးခဲ့သော ကျမ်းတစ်ဆူ ဖြစ်သည်။
ကုရ်အာန်၂း၁၈၅တွင် ကုရ်အာန်သည် လူသားတစ်ရပ်လုံးအတွက် လမ်းညွန်ချက်ဖြစ် သည်။ ၎င်း၏လမ်း ညွန်ချက်သည် ထင်ရှားသော အထောက် အထား ဖြစ်သကဲ့သို့ အ မှားနှင့် အမှန် ကို ခွဲခြား သိရှိနိုင်သော မှတ်ကျောက် လည်းဖြစ်သည်။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ခေတ်ရှေ့ပြေးဟောကိန်းများ(၁) မှ (၁၂) ပေါင်းချုပ်
PDF (1.8MB) | ZIP (1.6MB)
အထက်ပါ တိုတောင်း လှသော စာပိုဒ်လေးတွင် ကမ္ဘာ့လူသား တစ်ရပ်လုံးအတွက် မရှိ မဖြစ် အလိုအပ် ဆုံး သော ၊အဓိကအချက် သုံးချက်ပါဝင်လေသည်။
(၁) ကုရ်အာန်၏လမ်းညွန်မှူသည် လူသားတစ်ရပ်လုံးအတွက် ဖြစ်သည်။ ထိုလမ်းညွန် မှူတွင် ခေတ်တိုင်နှင့် နေရာတိုင်းအတွက် သဟဇာတဖြစ်သော ကုံလုံကြွယ်ဝ ပြီးပြည့်စုံ သည့် နည်း စနစ်များ ပါဝင်သည်။
(၂) ထိုလမ်းညွန်မှူတွင် လက်တွေ့ဘဝ တည်ဆောက်ရာ၌ ရရှိမည့်အကျိုးများနှင့် စပ် လျှင်းပြီးနားလည် ရန်လွယ်ကူသော ကျိုးကြောင်းဖော်ပြချက်များဖြင့် အပြည့်အဝအာမ ခံချက် များ ပါဝင်သည်။
(၃)လက်တွေ့ဘဝတွင် အကောင်းနှင့်အဆိုးကို တိကျသေခြာစွာ ခွဲခြားစိတ်ဖြာ၍ ၊ ကွက် ကွက်ကွင်းကွင်း ပိုင်းခြားနိုင်သော၊ စံချိန်စံညွန်းများပါဝင်သည်။ ထိုကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် သည် အာရဗီ စာပေဖြင့် ချပေး သောကျမ်းမြတ် ဖြစ်သော်ငြားလည်း အရဗ်များအတွက် သာလျှင် မဟုတ်ကြောင်းကို ကုရ်အာန် ၈၁း၂၇ တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
(ထို လမ်းညွန်ကျမ်း ကုရ်အာန်သည် လူသားတစ်ရပ်လုံးအတွက် ဆုံးမသြဝါဒကျမ်းးဖြစ်သည်။)
ထိုကျမ်းသည် လူသားတစ်ရပ်လုံးအတွက် ဖြစ်သည်။ ထိုဖော်ပြပါ အာယာသ်သည် အစော ဆုံးကျရောက်သော အာယာသ်များတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစတင်၍၊ အစ္စလာမ် ဟူ သောသာ သနာသည် ကမ္ဘာ့လူသားတစ်ရပ်လုံးအတွက် ကမ္ဘာကုန်ကျယ် သရွေ့ ကမ္ဘာကြီး တည်ရှိနေသ၍ လူသားတစ်ရပ်လုံးအတွက် အခြေခံဝါဒ လမ်းစဉ်အဖြစ် စတင် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆက် လက်၍ ၈၁း၂၈ တွင်
(အသင်တို့အနက် ထို ကျမ်းဂန်၏ လမ်းညွန်မှူအတိုင်း ဘဝတည်ဆောက် သူများသာလျှင် ဖြောင့်မတ်သော လမ်းမှန် ရရှိသူ များ ဖြစ်သည်။)
အထက်ပါအာယသ်၏ လှပရှင်းလင်းသောဖော်ပြချက်မှာ လူသားများအနက် မည်သူမဆို ကုရ်အာန်၏ လမ်းညွန်မှူအတိုင်း ဘဝတည်ဆောက်သူများသာလျှင် ဖြောင့်မတ်သောလမ်း မှန် ရရှိသူ များဖြစ်သည်ဟူသော အချက်ပင်။ ကုရ်အာန်သည် အာရဗီစာပေဖြင့် ချပေး ခဲ့သော ဗျာဒိတ်ကျမ်းဂန်ဖြစ်သော်ငြားလည်း၊ အရဗ်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှူ များပါဝင်ခြင်းမ ရှိပေ။
ထိုကျမ်းတွင် လူသား၏ သဘောသဘာဝများကိုဖော်ပြထားသည်။ ထိုနည်းတူစွာ၊ ထို ကျမ်းသည်အရဗ်များအတွက် သက်သက်မဟုတ်သကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့လူသား တစ်ရပ်လုံးအ တွက် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် လူသားတစ်ရပ်လုံးအနက် ထိုကျမ်း၏လမ်းညွှန်မှုအတိုင်း ဘ ၀တည်ဆောက်သူများသာလျှင်ဖြောင့်မတ်သော တရားလမ်းမှန်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ အရဗ်ဖြစ်စေ၊ အာရဗ်မဟုတ်သူဖြစ်စေ၊ အမျိုးသားဖြစ်စေ၊အမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊ မည်သူ့ကိုမျှ ပိုမိုအခွင့်အရေးပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ်လျော့၍ အခွင့်အရေးပေးခြင်းမျိုးမရှိဘဲ ထိုကျမ်းပါလမ်းညွန်ချက်အတိုင်း လိုက်နာသူများသည်သာ လျှင်ဖြောင့်မတ်သောတရား လမ်းမှန်ရရှိမည့် ဖြစ်သည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်သည်လူသားတစ်ရပ်လုံးအတွက် ဖြစ်ပါလျှင်မည်သို့သောအကြောင်း များကြောင့်အရဗီစာပေ ဘာသာစကားဖြင့် ချပေးခဲ့သနည်းဟူသောအချက်ကိုအောက် တွင်ဖော် ပြ မည့် အာယာသ်များက ထင် ရှားစွာ မီးမောင်း ထိုးပြထားပြီးဖြစ်သည်။ ကု၇်အာန် ၁၂း၂
(ဧကန်ငါအရှင် သည်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို အာရဗီစာပေ ဘာသာစကားဖြင့် ချပေးခဲ့ရခြင်းသည် ၊အသင်တို့နားလည် သဘောပေါက်ရန် အလို့ငှါ ဖြစ်သည်။)ထို့ပြင် ၄၄း၅၈တွင်
(ငါအရှင်သည်ကုရ်အာန်ကို အသင်၏ နှူတ်လျှာတွင် လွယ်ကူစေခဲ့၏။ သို့မှသာ၎င်းတို့ တရားရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။) ကုရ်အာန် ၅၄း၁၇ ၊၂၂၊၃၂၊၄၀ တို.တွင်
And We have certainly made the Qur’an easy for remembrance, so is there any who will remind?
(ဧကန်ငါအရှင်သည် ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို လိုက်နာကျင့်သုံးရာ၌ လွယ်ကူစေခဲ့၏။ သို့ပါလျက် အသင်တို့အနက် ကုရ်အာန်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှရှိပါ ၏ လော။)
ဖော်ပြပါအာယသ်တို့်ကို ဆင်ခြင်ရုံဖြင့် အာရဗီစာပေသည် ၊ လွယ်ကူမှူ အပြည့်ရှိသည်။ ကုရ် အာန်ပါ လမ်းညွန်မှူသည် လူတိုင်းအတွက် ခေတ်တိုင်းနေရာတိုင်းနှင့်လိုက်ဖက်ညီ သည်။ လိုက်နာ ကျင့်သုံးရာ၌လွယ်ကူမှူ အပြည့်ရှိသည်ဟူသော အဖြေကိုတွေ့ရှိ ရပေ သည်။ ထပ်မံ၍ ကုရ်အာန် ၁၈း၁ တွင်
(ချီးကျုး ထောပနာမှူအပေါင်းသည် တုနှိူင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာအလ္လာဟ် အရှင်အတွက်သာလျှင် ထိုက်တန်ပေသည်။ ထိုအရှင်သည် မိမိ၏ကျေးကျွန်ထံသို.ကျမ်းဂန်ကိုချပေးခဲ့၏ ။ ထိုကျမ်းတွင် မည် သည့်ကွေ.ကောက်မှူ တစ်စုံတစ်ရာမျှမရှိပေ။)
ကုရ်အာန်ပါ လမ်းညွှန်မှူသည် လွယ်ကူရှင်း လင်းရုံမက ကွေ့ကောက်မှူကင်းသော ကျမ်း လည်းဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းကို အာရဗီစာပေဖြင့်ချပေးရသောအကြောင်းရင်းနှင့်စပ်လျှင်းပြီး ၊ အာရဗီ စာပေ၏လွယ်ကူမှူကို သိရှိရမည်ဖြစ်သည်။ အာရဗီ ဟူသော ဝေါဟာရမှာ (အ ရ ဗ)ဟူသော အာရဗီစာပေ၏ အရင်းအမြစ်မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အဓိပ္ပာယ်မှာ ရှင်းလင်းထင်ရှားခြင်း၊ ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြချက်။နားလည်သဘောပေါက် လွယ်ကူစေခြင်း။ လိုရင်းတိုရှင်း တိကျပြတ်သားသည်။ ဟူသော အနက်ပေးသည်။ (အာရဗီ အင်္ဂလိပ် အဘိဓါန် JM, COWAN စာမျက်နှာ ၂၀၇။
အာရဗီစာပေသည် အခြားသောစာပေ ဘာသာစကားများထက် လွယ်ကူကြောင်းကို ဓမ္မဓိ ဋ္ဌာန်ကျကျ တင်ပြရမည်ဆိုပါက အာရဗီစာပေတွင် ဝါစင်္ဂ(၃)မျိုးနှင့် သရ(၃)မျိုးသာလျှင် ရှိပေသည်။
ဥပမာအင်္ဂလိပ်စာပေတွင် ဝါစင်္ဂ(၈)မျိုးနှင့်သရ(၅)မျိုးရှိသည်။ မြန်မာစာပေတွင်ဝါစင်္ဂ(၉) မျိုးနှင့်သရ(၁၁) မျိုးရှိသည်။ တစ်ချိန်တစ်ခါက မြန်မာနိုင်ငံရှိ အစိုးရကျောင်းများတွင်၊အင်္ဂ လိပ် စာပေ ကို ပဉ္စမတန်းမှစတင်၍ သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဆယ်တန်းစာမေး ပွဲတွင်အောင်မြင်ကြသော ကျောင်းသားတစ်ထောင်အနက်ကျောင်းသား ဆယ်ဦးသည် အင်္ဂလိပ်စာ ဂုဏ်ထူးရ ရှိကြသည်။
ထိုကျောင်းသားအားလုံးသည် မွေးရာပါ မြန်မာစကားပြော ကျောင်းသားများ ဖြစ်ကြ သည်။ မြန်မာစာကို သူငယ်တန်းမှ စတင်သင်ကြားခဲ့သော ကျောင်းသားများဖြစ်ပါ လျှက် မြန်မာစာ ဂုဏ် ထူးရရှိသူ ဦးရေမှာ ဆယ်တန်းအောင်မြင်သော ကျောင်းသား တစ်ထောင်အနက် တစ်ယောက်နှူန်းမျှသာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြန်မာ စာပေတွင် အင်္ဂလိပ်စာပေထက်ဝါစင်္ဂ တစ် မျိုးပို၍ များခြင်း ၊ထိုကဲ့သို့ပင်သရ (၆)မျိုးပို၍ များခြင်း တို.ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အာရဗီစာပေသည် အထက်မှ ဖော်ပြခဲ့သော အင်္ဂလိပ်စာပေ မြန်မာစာပေများထက် ပိုမို၍ လွယ်ကူသောစာပေတစ်ခုဖြစ်သည်။ တုနှိူင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာအရှင်သည် ကုရ်အာန်ကိုနောက် ဆုံးကျမ်း အဖြစ်ကမ္ဘာ့ လူသားတစ်ရပ်လုံးအတွက် ကမ္ဘာကြီး တည်ရှိနေသရွေ.လမ်းညွန် အဖြစ်ကျေညာပြီးဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းပါ ဝေါဟာရများကို တစ်လုံးတပါဒမျှပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှူမ ရှိနိုင်ရန် ထိုအ ရှင်ကိုယ်တိုင် ထိမ်းသိမ်း မည်ဟုကတိ ပေးထားပြီးဖြစ် သည်။ ထိုကျမ်း ပါ လမ်းညွှန်ချက်များသည်၊
လူ့ဘဝတစ်လျှောက် ခေတ်တိုင်း နေရာတိုင်းတို့တွင် ကြုံတွေ့ခံစားရမည့်ပြဿနာအဝဝ ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သော နည်းလမ်းများပါဝင်သည်။ ထိုကျမ်းတွင် အနုမြူမှူံမှသည် စကြဝဋ္ဌာကြီး တစ်ခုလုံး အထိ ဖြစ် ပေါ်ပြောင်းလဲမှူများအ ကြောင်း အသေးစိတ် ရှင်း လင်းချက်များပါဝင်သည်။
ထိုသို့သောလမ်းညွှန်ကျမ်းအမျိုးအစားသည် လွယ်ကူရှင်းလင်းရမည်၊ မြဲမြန်ခိုင်ခန့်တိကျ ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုလိုအပ်ချက် အားလုံး နှင့်ကိုက်ညီသော စာပေအမျိုးအစားမှာအရဗီ စာပေတစ် မျိုးထဲသာ လျှင်ဖြစ်ပေသည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ခေတ်ရှေ.ပြေးဟောကိန်းများ။(၁) ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ခေတ်ရှေ့ပြေးဟောကိန်းများ။ (၂) ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ခေတ်ရှေ့ပြေးဟောကိန်းများ။(၃)
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ခေတ်ရှေ့ပြေးဟောကိန်းများ(၄) ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ခေတ်ရှေ့ပြေးဟောကိန်းများ(၅) ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ခေတ်ရှေ့ပြေးဟောကိန်းများ(၆)
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ ခေတ်ရှေ့ပြေးဟောကိန်းများ(၇) ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ ခေတ်ရှေ့ပြေးဟောကိန်းများ(၈) ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ ခေတ်ရှေ့ပြေးဟောကိန်းများ(၉)
ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ခေတ်ရှေ့ပြေးဟောကိန်းများ(၁၀) ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ခေတ်ရှေ့ပြေးဟောကိန်းများ(၁၁) ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ခေတ်ရှေ့ပြေးဟောကိန်းများ(၁၂)
According to [Quran 2:185 The month of Ramadan in which was revealed the Qur'an,aguidance for mankind, and clear proofs of the guidance, and the Criterion (of right and wrong)], and [Quran 2:2 ~5This Book, there is no doubt in it, isaguide to those who guard (against evil). Those who believe in the unseen and keep up prayer and spend out of what We have given them. And who believe in that which has been revealed to you and that which was revealed before you and they are sure of the hereafter. These are onaright course from their Lord and these it is that shall be successful.], I understand that to beatrue believer to the GOD we have to believe and learn not only HOLY QURAN but also HOLY BIBLE too because both of these two holy scriptures came from the same GOD. We cannot logically declare ourselves that because of HOLY QURAN alone we will be perfect. Please advice on this topic.
Hot debate. What do you think? 1718 Dec 09 @ 7am
Thank you for your first post which highlights why the Holy Quran has been revealed in Arabic.
Another point is importance of understanding the teaching of Holy Quran. Without proper understanding of Holy Quran, implementation of the Divine guidance to our life will be not possible.
“ကုရ်အာန်ပါ လမ်းညွှန်မှူသည် လွယ်ကူရှင်း လင်းရုံမက ကွေ့ကောက်မှူကင်းသော ကျမ်းလည်းဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းကို အာရဗီ စာပေဖြင့် ချပေးရသောအကြောင်းရင်းနှင့် စပ်လျှင်းပြီး ၊ အာရဗီ စာပေ၏ လွယ်ကူမှူကို သိရှိရ မည်ဖြစ်သည်။ အာရဗီ ဟူသော ဝေါဟာရမှာ (အ ရ ဗ) ဟူသော အာရဗီ စာပေ၏ အရင်း အမြစ် မှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အဓိပ္ပာယ်မှာ ရှင်းလင်းထင်ရှားခြင်း၊ ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြချက်။ နားလည်သဘောပေါက် လွယ်ကူစေခြင်း။ လိုရင်းတိုရှင်း တိကျပြတ်သားသည်။ ဟူသော အနက်ပေးသည်။ (အာရဗီ အင်္ဂလိပ် အဘိဓန်JM, COWAN) စာ မျက်နှာ ၂၀၇။”
May Allah bless Saya Lwin blessed with divine guidance to write more of this series in future.
Well-loved. 13019 Dec 09 @ 11pm
လူကြီးမင်း Roger Kyaw ရဲ့ ကွန်မင့်ကို တစ်လေးတစ်စား အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အစ္စလာမ် မတိုင်မှီ ရှေး ဘာ သာပေါင်း များစွာ ရှိခဲ့တယ်။ လူမျိုးတိုင်းကိုယ်စီအတွက် ရစူလ်လို့ ခေါ်တဲ့ ကျမ်းစာပါလာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ နဗီလို့ ခေါ်တဲ့ လူသားအပေါင်း အတွက် သတင်းကောင်းဆောင်လာတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာကို အစ္စလာမ် သာသနာက လုံးဝ ဥဿုံ ယုံကြည် လက်ခံရပါတယ်။ အဲ့ဒီ အချက်ကို လက်မခံရင် အစ္စလာမ် သာသနာဝင် ဖြစ် ခြင်း ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ရည်နဲ့ မညီညွတ်ပါဘူး။
နောက်တစ်ချက်က- ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ် သာသနာဝင်တွေဟာ ကုရ်အာန် မတိုင်မှီ ရှေးက ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေ ပညတ်ချမှတ်ဆောင်ကြည်းလာတဲ့ ကျမ်းတွေရှိခဲ့တယ် ဆိုတာကိုလည်း လက်ခံပါတယ်။ ကုရ်အာန်မှာ- ဤ ကုရ်အာန်သည် ရှေးကျမ်းများကို မိုဆွဒ်ဒေကန်မ် ပြုသောကျမ်းလို့ အခိုင်အမာ ဆိုပါတယ်။ မိုဆွဒ်ဒေကန်မ် ဆိုတာ မူရင်းပျက်နေသည်များကို မူရင်းအတိုင်း ပြန်လည် ဖြစ်စေသော- (ပြန်လည်ဖြောင့်မှန်စေသော)လို့ ဆိုပါ တယ်။ ဘာသာပြန် အချို့မှာတော့- (ထောက်ခံသော)လို့ လွဲမှားစွာ ပြန်ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် များသော အား ဖြင့် ဘာသာပြန်တွေမှာ verifying စစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်စေသောလို့ ပြန်ဆိုကြပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် လူသား တို့၏ ရိုးရာများဖြင့် အရောင်တင်ထားသည်ကို ပြန်လည်စီစစ်ခြင်းဖြင့် အမှန်ကို ပြန်လည်တင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါ တယ်။
ဥပမာ- ခရစ်တော်ယေရှုကို ခရစ်ယာန်အများစုက အလွန်အေးချမ်းလှတဲ့ ဆောင်းရာသီ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်နေ့မှာ မွေးတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ကုရ်အာန်က အဲ့ဒီအချက်ဟာ လွဲချော်နေကြောင်း အမှန်က- စွန်ပလွံသီး မှည့်ချိန် နွေရာသီမှာ မွေးဘွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ကုရ်အာန် ၁၉း၂၅ မှာ တင်ပြပါတယ်။ ခရစ်ယာန် သုတေသီ အတော်များများ ကလည်း ခရစ်တော်ကို မတ်ခ်ျ ၂၅ ရက်နဲ့ မေလ ၁၅ ရက် အတွင်း နွေရာသီမှာ မွေးဘွားခဲ့ ကြောင်း သက်သေ ပြချက်ပေါင်းများစွာ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ ခရစ်ယာန် မန်မွန် အသင်းက- မေလ ၁၄ ရက် နေ့မှာ မွေးတယ်လို့ အတိအကျ ဆိုလာပါတယ်။
ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်- လူကြီးမင်း တင်ပြလာတာကို- ကျွန်တော် အသိအမှတ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့- လူကြီးမင်းကို မေတ္တာ ရပ်ခံချင်တာက- လူကြီးမင်း ဖေါ်ပြစေလိုတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာ ဆိုတာ ဘယ်စာအုပ်ကို ရည်ညွန်းပါသလဲလို့ အတိ အကျ သိလိုပါတယ်။ အရှေ့တိုင်း အော်သိုဒေါ့များ လက်ခံတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာလား။ ယေဟောဝါများ လက်ခံတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာလား။ မန်မွန်များ လက်ခံတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာလား။ အစဉ်အလာ လူအများစုကြီးသိတဲ့ ရိုမန် ကက် သလစ်များက မူချမှတ်ထားတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာလား ဆိုတာပါ။
ကျွန်တော်တို့ အစ္စလာမ်မှာက ဘာသာပြန်တွေ အများကြီး ရှိပေမယ့်-၊ – ကုရ်အာန် ဆိုတာ မူရင်း တစ်အုပ် တည်းပဲ ရှိပါတယ်။ တမန်တော် မုဟမ္မဒ်က အာရဗ်တစ်ဦး ဖြစ်တယ်။ အာရ်ဗီလို ပြောခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ အာရ်ဗီလို မူရင်းကျမ်း (စံပြုထားတဲ့ကျမ်း) တစ်အုပ်တည်းပဲ- ၏၊သည် မလွဲ ရှိနေပါတယ်။
အလားတူပဲ- ခရစ်တော်ယေရှုက- ဟီးဘရူးလို ပြောခဲ့တယ်။ သူပြောခဲ့တဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ သူရှိစဉ်က မှတ် တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ မူမကွဲတဲ့ သမ္မာကျမ်း စာများ ရှိရင်- ကျွန်တော့ဆီကို ပို့ပေးစေချင်ပါတယ်။ (နောက်ပိုင်း– အခြား ဘာသာမှ တဆင့် ဟီးဘရူးသို့ ပြန် ဆိုခြင်းများကို မဆိုလိုပါ။) အဲ့ဒီလို မူရင်းမပျက် စံအဖြစ် ရှိနေတယ်-ဆိုရင်၊ ကျွန်တော် အဲ့ဒီ စာအုပ်ကို အသိအမှတ်ပြု ဖေါ်ပြပေးပါမယ်။
အခု လူကြီးမင်း ရည်ညွန်းတဲ့ သမ္မာကျမ်းစာ ဆိုတာက- ခရစ်ယာန်လောကမှာတင် မတင်မကျမှုတွေ ရှိနေပါ တယ်။ ကျွန်တော်ဖေါ်ပြမိရင်- ခရစ်ယာန်ချင်း ပြသနာ ဖြစ်သွားမှာကို စိုးရိမ်ပါတယ်။
Well-loved. 14021 Dec 09 @ 3am
Dear Brother Roger Kyaw,
Thank you for your comment that demonstrated genuine interest in Islam, and the Holy Book Al Quran.
We Muslims accepts Esa (Jesus) PBUH as one of the great messengers of Allah(Swt).
In the Holy Quran Surah Maryam ( Mary) is the Chapter that honored mother Mary with the name. It reflects the authenticity of the Holy Quran as divine revelation.
Most of the non Muslim orinetalists accused Prophet Mohammed (PBUH) is the person who himself created Holy Quran. You must remember that Prophet Mohammed (PBUH), as an Arab, and illiterate. It is very difficult for him to produceaSurah by the name ofawoman, which is against the culture of the Arab during the pre Islamic period.(Pre Islamic Arabs even buried the newborn baby girls alive).
If Prophet (PBUH) hasachoice he would rather produceaSurah by the name of Khatijah or Fatimah , his beloved wife and daughter who sacrificedalot with Prophet during the difficult period of His early prophet hood.
However, Holy Quran, beingadivine revelation, Prophet has no authority upon original revelation, thus, Surah Maryam, is until today recited by billion of Muslims in their daily prayers. I think Muslims remembers more than Christians to Prophet Esa (Jesus) PBUH and Maryam asaProphet andachosen lady.
That is only one example of the authenticity of the Holy Quran.
In the Holy Quran, Bible is mentioned as one of the Holy books, but it has lost its authenticity due to human interferences.
The religion with Allah is al-Islam. Those who received the scripture ( before) differed only after knowledge came to them, through transgression of their own. Whoever disbelieves in the revelations of Allah: He is swift in reckoning! ( Ali Imran 3:19)
I would suggest you to read Surah Maryam, Chapter 19 of Holy Quran, and also suggest you to read Surah 18 Al Kalf ( The Cave). Holy Quran explained in detailed about who are the people of cave, how long they fell asleep in the cave, in very detailed manner that you will unable to find in any of the Bibles.
Well-loved. 12021 Dec 09 @ 7am
ညီအစ်ကို ရော်ဂျာကျော် ခင်ဗျာ၊
ယနေ. ခရစ်ယာန် သာသနာဝင်များ ထံတွင်ရှိသော HOLY BIBLE သည်
ထာဝရ ဘုရားသခင်ထံမှ ရောက်ရှိလာသော ဗျာဒိတ် အတိုင်း မည်မျှ
ရှိနေသည် (သို.) မည်မျှလူတို.၏ စွက်ဖက်မှုများ ပါဝင်နေသည် ကို
အစ္စလာမ့် သုတေသီ အာဟ်မဒ် ဒီဒါတ် ၏ အတိအကျ ဖေါ်ပြထား
သော စာအုပ်ကို ဖတ်စေလိုပါသည်။
Well-loved. 13021 Dec 09 @ 4pm
Htay Lwin Oo says:
(၁)ယေရှုသည် ဒါဝိတ်၏ အမျိုးဖြစ်သည်- အနွယ်ဖြစ်သည် (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂၂း၁၆)
(၂)ယေရှုသည် ခရစ်တော် ဖြစ်ရန် ဧမာနွေလ ဖြစ်ရမည်။ (ဟေရှာယ ၇း၁၄။ မဿဲ ၁း၂၃)
(၃) သူသည် ဧမာနွေလ ဖြစ်ရန် ဒါဝိတ်၏ အမျိုး ဖြစ်ကို ဖြစ်ရမည်။ (ဟေရှာယ ၇း၁၄)
သို့ဆိုလျှင်- သူသည် ဒါဝိတ်နှင့် အမျိုးတော်ရန် မာရိဘက်မှ ဖြစ်သလော။ ယောသပ် ဘက်မှ ဖြစ်သလော?
ယေရှု၏ မိခင် မာရိကို သမ္မကျမ်းစာတွင် ၂၈ ကြိမ်ဖေါ်ပြသည်။ (မာဂ ဒလ မာရိ- မဟုတ်ပါ)။ ထိုဖေါ်ပြသမျှတွင် မာရိသည် ဒါဝိတ်နှင့် အမျိုးတော်သည်ဟု လုံးဝ လုံးဝ ပြောမထားသည့် အပြင်- သမ္မာကျမ်းစာ၏ အခြားသော မည်သည့်နေရာတွင်မှ လည်း ပြောမထားပါ။ ယောသပ် ကိုသာ ဒါဝိတ်၏ အမျိုး ဖြစ်သည်ဟု အတိအကျ ဆိုပါသည်။ (မဿဲ ၁း၁၈။ လုကာ ၁း၂၆)
လက်ရှိသမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်သူများ အနေဖြင့် ယေရှုသည် ယောသပ်၏ သွေး တစ်စက်မှ မပါခဲ့သော်- ဒါဝိတ်နှင့် ယေရှု မည်သို့ အမျိုးတော်ပါသနည်း။
ဒါဝိတ်နှင့် အမျိုးမတော်သော ယေရှုသည် ဧမာနွေလ မဖြစ်နိုင်သလို၊ ခရစ်တော် ဆိုသော ဘွဲ့ကို ဆွတ်ခူးနိုင်မည် မဟုတ်ပေ၊ (အထက်ပါ။ ၁- ၂ တွင် ကျမ်းချက်ပေးခဲ့ပြီ)။
သို့ဖြစ်လျှင်- ယေရှုအား ခရစ်တော်ဟု ယုံကြည်နေပါလျှက်- အဘယ်ကြောင့် ယောသပ်၏ သားဟု ၀န်မခံဘဲလျှက်- ထာဝရဘုရားသခင်၏ သားဟု စွပ်စွဲနေကြ သနည်း။
သမ္မာကျမ်းစာအား ယုံကြည်သူတိုင်း- သမ္မာကျမ်းစာ အတိုင်း ဖြောင့်ဖြောင့်မှန်မှန် ယုံကြည်သင့်သည် မဟုတ်ပေလော။
ဌေးလွင်ဦး (Buddhism, Christinity & Islamic Scholar)
Well-loved. 13026 Dec 09 @ 9pm
Roger Kyaw Swar Phone Maung says:
Thank you very much for all of your discussion.
1.	First of all, the version of Holy Bible I referred here is (NIV, New International Version). According to its preface, NIV isacompletely new translation of the Holy Bible made by overahundred scholars working directly from the best available Hebrew, Aramaic and Greek texts. That version can currently considered as the most widely used version in the world. NIV is showing the chapters from Genesis to Revelation which means it covers Jewish Bible (Old Testament) and Christian Bible (New Testament) altogether.
I would like to say for the fact that the percentage of correctness on that version of Bible can only verified when Jesus (AS) come back. Instead of making so much debate, that is the most logical and authentic answer ever. So I would like to say that we, the Muslims, also should pray the second coming of Jesus (AS) to be in the very near future to clear all of this discrepancy.
My concern is just to satisfy the Quranic statements [2: 185] / [2: 2~5] / [3:3], we surely need something (which is the previous scriptures really come from the mighty GOD (Allah)), otherwise we are still not perfect by learning Quran alone. Since I m unable to understand the languages like Hebrew, Greek etc, that book (NIV Bible) is the maximum limit which I can reach to cover this GOD guideline. In conclusion, I believe if we understand and apply all these scriptures in our everyday lives, the muslims will be the most realistic / most disciplined / most successful people all over the world apparently.
2.	Secondly, I would like to discuss about the terms ‘GOD (Allah) as the father’ & ‘ Jesus (AS) as the son of GOD’.
According to NIV Bible, GOD (Allah) is calledaFather because he is the Creator of All. [Isaiah 64:8] Yet you, LORD, are our Father. We are the clay, you are the potter; we are all the work of your hand. Since Jesus was created by God, he is called God’s Son. For similar reasons, the Angels and even the man Adam (AS) are also called as sons of God.
[Job 1:6] One day the angels (in Hebrew, it is interpreted as sons of GOD) came to present themselves before the LORD, and Satan also came with them.
[Luke 3:38] … the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God.
Based on these Biblical verses, I understand these terms are just “the rhetorical usage of classical literature” only. It should not be the case to make big concern.
3.	Then, I have some confusion inaverse of Quran “[32: 5] He rules (all) affairs from the heavens to the earth: in the end will (all affairs) go up to Him, onaDay, the space whereof will be (as)athousand years of your reckoning.” Is this verse really saying like this ? I m so sorry to say that I don’t understand Arabic, I can only utilize English Translation and Myanmar Translation of Holy Quran in my daily life. According to this verse, what I understand is to reach to Allah, we have to take thousands of years (based on which speed I don’t know) OR can we really go to Allah if we can take the thousands of years? OR does Allah only know the information of each affairs of this world only after the thousands of years ? I have confused already, please kindly advice on this. Something is supposed to be incorrect in translation.
4.	Finally, I would like to discuss about the Arabic literature which is originally used throughout Holy Quran. I just watched ‘National Geographic Documentary : The Koran’afew days ago. It is trying to prove that the original text of Holy Quran never used the vowels. During the time of Prophet Mohammad (SAAS), the Arabic language used only consonants like characters (or may be consonants only). But now-a-day, the Arabic language is using the vowels & diphthongs together with the consonant characters. So for me, I got confused. Is this really true? If yes, when the vowels & diphthong were incorporated in Arabic language? Based on this, might the original meaning of Quran have been changed slightly? So please, this matter should be treated as SERIOUS. Please advice on this also. I recommended all of you to takealook the film ‘National Geographic : The Koran’ before you discuss.
Hot debate. What do you think?08 02 Jan 10 @ 9am
In my previous comments, I would like to add the following statements in item 1. of my previous discussion.
Takealook my opinion by this example. Let’s consider ourselves that we are the students we have to take the exam. For that exam we need2text books, ‘A’ & ‘B’.
I m also one of the students. But unfortunately, some pages of the text book ‘A’ damaged in me and I can’t recover it at all but I still can read the remaining pages of it and the text book ‘B’ has no defect. For this situation, what should I do? I will not throw away the remaining pages of that text book ‘A’, I will still keep and study the remaining pages as one of my essential text book.
That’s why, I m keeping on saying that, the Muslims are required to learn HOLY QURAN & HOLY BIBLE and to pray for the second coming of Prophet Jesus (AS) as soon as possible.
Now what I found all over the world is that the Muslims are not willing to learn HOLY BIBLE and the Muslims are supposed to have forgot to pray for the second coming of Prophet Jesus in our daily prayer (Salat), I feel sad on that matter. Logically speaking, to beatrue Believers of GOD (OR) the persons who submit the will of GOD (in Arabic, Muslims), I understand that learning of HOLY QURAN & HOLY BIBLE is more accurate instead of learning of HOLY QURAN & Hadith.
I totally believe when Prophet Jesus (AS) comes back to this world, he will be the greatest leader all over the world and many things will change, many miracles will happen because of the RANK he has already received from the Al-mighty GOD (Allah). Note that he is the one and only alive Prophet of GOD who will come back to this world and currently in the Heaven. With his second coming and teaching, we will also get the deeper enlightment to HOLY QURAN, on the other hand, he will troubleshoot the incorrectness in HOLY BIBLE. I totally welcome his second coming. See the following verses from the HOLY QURAN confirming his second coming , his future existence on this world until the day of Judgement and he is to be considered as the same rank with Prophet Mohammad (SAAS).
[Quran 4: 157] And [on account of] their saying: “We killed the Messiah, Jesus son of Mary, messenger of God.” They did not kill him and they did not crucify him, but it was made to seem so to them. Those who argue about him are in doubt about it. They have no real knowledge of it, just conjecture. But they certainly did not kill him.
[Quran 3: 55] When Allah said, ‘Isa, I will take you back and raise you up to Me and purify you of those who are disbelievers. And I will place the people who follow you above those who are disbelievers until the Day of Rising. Then you will all return to Me, and I will judge between you regarding the things about which you differed.
[Quran 3: 84]	Say: “We believe in Allah, and in what has been revealed to us and what was revealed to Abraham, Isma’il, Isaac, Jacob, and the Tribes, and in (the Books) given to Moses, Jesus, and the prophets, from their Lord: We make no distinction between one and another among them, and to Allah do we bow our will (in Islam).”
There are many verses like these.
Hot debate. What do you think?08 02 Jan 10 @ 12pm
ကိုရောဂျာရဲ့Comment တွေအများကြီးရောက်လာတာကို Quraninburmese.com ကအထူးကြိုဆိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Website က ကုရ်အာန်၏ အသိပညာတိုးပွားရေးတစ်ခုထဲကို ရှေးရှုသော Website တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကုရ်အာန်နှင့် စပ်လျှင်းတဲ့ အကြောင်းအရာဟူသမျှအားလုံးကို ကုရ်အာန်နည်းကျ ပြန်လည်ဖြေကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ကုရ်အာန်သည်စင်္ကြာဝဠာရှိ လူသားတစ်ရပ်လုံးအတွက် ကမ္ဘာတည်ရှိနေသ၍ လမ်းညွှန်လျှက်ရှိနေမည့် ကျမ်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကျမ်းရှိနေသ၍ အခြားမည်သည့် ရှေးကျမ်းများကိုမျှ လေ့လာလိုက်စားရန်မလိုအပ်ဟုသဘော ပေါက်ထားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုရှေးကျမ်းများသည် နှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်အတွင်း အကြိမ်ပေါင်း မရေတွက်နိုင်လောက်အောင် လူတို့၏ဖြည့်စွက် ထုတ်ပယ်မှုများအားဖြင့် မူရင်းပျောက်ဆုံးသွား ရပြီးဖြစ်သည်။ပြီးပြည့်စုံသောကုရ်အာန်သည် လက်ဝယ်ရှိနေပါလျှက် ပြီးပြည့်စုံမှုမရှိတော့ သော လူသားတို့၏ လူရေးကျမ်းများ၊ လူရေးအဆိုများကို လက်ခံရာ၌လည်း ကုရ်အာန်၏ မှတ်ကျောက်စံချိန်စံညွှန်းဖြင့် တိုင်းတာ၍ ပြည့်မှီပါက ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယူဆ၍၊ မပြည့်မှီပါက ဖြစ်နိုင်စရာမရှိဟု လက်ခံသဘောတူညီရမည်မှာ ကုရ်အာန်ကိုယုံကြည်သော မွတ်စလင်မ်တစ် ယောက်၏ ခံယူချက်ဖြစ်သည်။
ကုရ်အာန်သည် ပြီးပြည့်စုံသော ကျမ်းဖြစ်သကဲ့သို့ ထိုကုရ်အာန်ကိုချပေးခြင်းခံရသော တမန် တော်မုဟမ္မဒ် (အရှင်၏ငြိမ်းအေးမှု အပေါင်းကျရောက်ပါစေ) မကွယ်လွန်မီအလျှင်ကပင် ကဏ္ဍ ၅ အာယာသ်(၃)အားဖြင့် အစ္စလာမ်သာသနာသည် ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။အဲ့ဒီပြီးပြည့် စုံပြီးသော ကျမ်းကို အရှင်ကိုယ်တိုင်မူရင်းမပျက် ထိမ်းသိမ်းမည်ဟုကတိပေးထားပြီးဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီ့ပြီးပြည့်စုံသောကျမ်းရှိနေသ၍ မည်သည့်တမန်တော်မျှ ထပ်ပွင့်ရန်မရှိတော့ဟု အပြီးပြတ် မိန့်ထားပြီးဖြစ်သည်။ တမန်တော်ပွင့်ရန် မလိုအပ်တော့သောပြီးပြည့်စုံသည့်သာသနာအတွက် အခြားမည်သည့် လူသားကယ်တင်ရှင်မျှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာဦးမည်ဟု ကုရ်အာန်တွင် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သို့မဟုတ် တဖြေးဖြေးချင်းစဉ်းစားပြီးမှ တရေးရေး ပေါ်လာနိုင်သော ဟောကိန်းများ လုံးဝဥဿုံမပါဝင်ပေ။
ကိုရော်ဂျာ ယူဆသလို ပြီးပြည့်စုံပြီးသောအစ္စလာမ်သာသနာအတွက် မူရင်းပျက်နေတဲ့ သမာကျမ်းအတောက် အကူပျြ မှ ပြည့် ရ မည်မဟုတ်ပါ၊ ထိုကဲ့သို့ ယူဆနေခြင်းသည်ပင်လျင် ကိုရောဂျာရဲ့ နှစ်လုံး သည်းပွတ် အတွင်း အရိုး စွဲနေတဲ့ အစွဲကြောင့်ပါ။ အဲ့ဒီအစွဲ ကတော့ ခေတ်အဆက်ဆက် လူတို့၏ ပျြပြင် ပြောင်းလဲလာခဲ့ သော လူရေးကျမ်း မူဝါဒ ကြောင့် ပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ မူရင်းဗျာဒိတ် အားလုံး ဟာ ပြီးပြည့် သော ဗျာဒိတ် များဖြစ်သည်။
Well-loved. 10013 Jan 10 @ 1am
ထိုဒွိဟကင်းသောကုရ်အာန်ကို လူသားတို့၏ လက်ရာများဖြင့် ရောနှောနေသော Bible ၏အဆိုအမိန့်လောင်းရိပ်အောက်မှဖွင့်ဆိုသော ဘာသာပြန်များကြောင့် ကို ရော်ဂျာအဖို့ အလွန်ခေတ်ရှေ့ပြေးလျှက်နေသော ၃၂း၅ပါ အချိန်နှင့်စပ်လျှင်းသောအမိန့်သည် မျက်စိလည်သွားရခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ကိုရော်ဂျာအနေဖြင့်လက်ရှိ Bible သည်မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ ဗျာဒိတ် အတိုင်းကျန်ရှိနေပါသေးသလဲဟူ၍ သိလိုပါက Bible သည်ဘုရားသခင်၏ စကားဖြစ်သ လော ဟူသည့်စာအုပ်ကိုဖတ်ပါ။
QuraninBurmese.com တွင် Download လုပ်လို့ရပါသည်။ အကယ်၍သာ ကိုရော်ဂျာ အဲ့ဒီစာအုပ်ကို ဖတ် ခဲ့လျှင် Bible ကိုကိုးကားသော comments များကိုပင် ရေးတော့ မည်မထင်ပေ။
ကုရ်အာန် တွင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်း မတူညီသော အချိန်ကာလ တို့၏လွမ်းခြုံ မူအောက်တွင် တည်ရှိနေသော ဖန်ဆင်း ခံတို့အကြောင်း ပါဝင်သည်။
ကိုရော်ဂျာ မျက်စိလည်နေသော (ကုရ်အာန် ၃၂း၅) ၏သဘောကိုနားလည်ရန်အတွက် ကုရ် အာန်ပါ အခြားအခြားသော အာယာသ်များကို သဘောပေါက်နားလည်ရန် အထူးလိုအပ်ပေ သည်။ဥပမာ ကုရ်အာန်မှာ ရှေးယခင့်ယခင် လူသားများခေတ်တွင် လပေါင်းတစ်ထောင်မျှသွား
ရမည့် ခရီးတစ်ခုကို ကုရ်အာန်ရောက်ရှိပြီးသော နောက်ပိုင်းခေတ်တို့တွင် တစ်ညခရီးသာဖြစ် မည်ဟု ကုရ်အာန်ကကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ တချိန်တခါက လူသားတို့ မြင်း ကုလားအုပ်များကိုစီး၍ လပေါင်းတစ်ထောင်မျှလောက် သွားရသောခရီးကို ယနေ့လေယာဉ် ဖြင့် တစ်ညခရီးပင်ဖြစ်နေသည်ကို ယနေ့လူသားများ မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ရုံမဟုတ်ပဲ ကိုယ် တိုင်သွားလာလျှက်ရှိနေပြီးဖြစ်သည်။ ကိုရော်ဂျာအား အကြံပြုလိုသည်မှာ အလွန်တရာမျှ ခေတ်မှီတိုးတက်ရုံမကပဲ ခေတ်ရှေ့သို့အမြဲဦးဆောင်လျှက်ရှိသော ကုရ်အာန်ကိုလေ့လာရာ၌ ကုရ်အာန်ကညွန်းသော နည်းလမ်းများအတိုင်းလိုက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကုရ်အာန်တွင် ၁၉၈၀ ပတ်ဝန်းကျင်ကမျှပေါ်သော AIDS ရောဂါပြန့်ပွားမှု ကာကွယ်နည်းများ ပါဝင်သည်ဟုဆိုလျှင် ကိုရော်ဂျာ အံ့သြသွားမလား။ ၂၁ ရာစုမှစတင်ပေါ်ပေါက်လာသော Global Warming အကြောင်း ကုရ်အာန်တွင်ပါသည်ဟုဆိုလျှင် ကိုရော်ဂျာပို၍ပင်အံ့သြသွား မည်ဖြစ်သည်။
အမှန်တကယ်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်၏ ခေတ်ရှေ့ပြေးဟောကိန်းများဟူ သည့်အခန်းဆက်ဆောင်းပါးတွင် ထိုအကြောင်းများအားလုံးကို အတိအကျဖော်ပြထားပါသည် ထိုဆောင်းပါးပါ အကြောင်းအရာများကို လိုက်မှီနိုင်ရန်အတွက် ရှေ့ပြေးအဖြစ် အခန်းဆက် ၁ မှ ၃ အထိကိုကြိုတင်ဖော်ပြထားပါသည်။ အခန်းဆက် ၄ မှစတင်၍ အထက်မှအကြောင်းအရာ များတွင်မက အခြားအခြားသော အကြောင်းအရာများကိုပါ သိပ္ပံနည်းကျ ဆက်လက်ဖော်ပြ သွားမည်ဖြစ်သည်။ကုရ်အာန်ကိုဆည်းပူးရာ၌ အခြားလိုအပ်ချက်တစ်ခုမှာ ၅၆း၇၉ (ကုရ်အာန် သည်အဖြူထည်သက်သက်ဖြစ်သူတို့မှအပ အခြားသူများအတွက် အာနိသင်ရှိမည်မဟုတ်)ဟု ဆိုထားသည်။ ကုရ်အာန်ကိုချဉ်းကပ်ရာ၌ ကုရ်အာန်၏ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ချဉ်းကပ်မှသာ လျှင် ကုရ်အာန်ကပေးသော အသိတရားများကိုခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ကုရ်အာန်ကိုလေ့လာရာ ၌ မိမိတို့၏နှလုံးသည်းပွတ်များအတွင်းအနည်ထိုင် အရိုးစွဲနေသော ဘာသာသာသနာစွဲ ဂိုဏ်ဂ နဝါဒစွဲ၊ ရိုးရာဝါဒစွဲ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ဝါဒစွဲများကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသာလျှင် ကုရ်အာန်ကပေးသောအသိကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကိုရော်ဂျာ၏Comment တစ်ခုဖြစ်သော ကုရ်အာန်သည် သရပါဝင်ခြင်းမရှိပဲ နောက်ပိုင်းမှ သ ရထည့်သည်ဟူသောအချက်မှာ လုံးဝမှားယွင်းပါသည်။ ကုရ်အာန်သည်လုံးဝအာရဗီစာပေဖြင့် ချပေးသော ကျမ်းဖြစ်သည်။ မူရင်းအာရဗီစာပေတတ်မြောက်သူတိုင်း ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ရွတ်၍ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။သို့ရာတွင် ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ရုံဖြင့် သို့မဟုတ် ဖတ်တတ်နား လည်သဘောပေါက်ပြီး ထိုကျမ်းပါအချက်အလက်များကို ထာဝရဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်ပါဟု ယုံကြည်မှုမရှိသူတို့အဖို့ထိုကျမ်း၏လမ်းညွှန်မှုကိုမရနိုင်ဟု လက်ဦးမဆွကပင်ကုရ်အာန်ကကျေ ညာထားပြီးဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်သာသနာအတွင်းသို့ ကမ္ဘာ့လူမျိုးအသီးသီးမှဝင်ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုလူမျိုးများ အားလုံးအာရဗီဘာသာစကားအား တတ်သိနားလည်မှုမရှိကြပေ။ သို့ရာတွင်၎င်းတို့သည် အစ္စ လာမ်သာသနာအတွက် ဗျာဒိတ်အဖြစ်ချပေးခဲ့သောကုရ်အာန်ကို ဖတ်ရွတ်သရဆည်ရာ၌ လွယ်ကူရန်အတွက် ကုရ်အာန်ကို မှန်ကန်စွာအသံထွက်ဆိုနိုင်ရန် အထောက်အကူပြု “ဟရ ကသ်”ဟုခေါ်သော Intonation sign ထည့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို sign အား ဖြင့်ကုရ်အာန်ပါ အနက်အဓိပ္ပါယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ခြင်း အလျှင်းမရှိပေ။အာရဗ်များသည် Intonation sign မပါသော ကုရ်အာန် ကိုသာ အသုံးပြု ကြသည်။
Dear Ko Roger,
I have decided to reply your lengthy argument that discredited the authenticity of Holy Quran by referringadocumentary produced by non Muslims,which also broadcasts very controversial issues such as UFOs, Ghost stories for the purpose of entertainment.
To me referringa( TV Channel- discovery channel) is somehow improper, (even Wikipedia will not accept this kind of citation) while we are havingaserious discussion about faith.
Your second point, asking Muslims to study the Bible isagood gesture, for those who have interest in comparative religions and interfaith studies.
Again, you seems to be having problem with so many versions of Bibles, with so many languages ( Roman, Hebrew, Latin) used in the original scriptures as you have admitted as finally hitawall. So for all of us who wish to study the Bible will be having problem in very beginning with doubts, struggling to differentiate between genuine word of God and men.
Muslims do not have problem in studying the Holy Quran as it has only one version with One author, Allah SWT.
You have quoted some verses of the Holy Quran for second coming of Esa (May peace be upon him).
For your information the Holy Quran is supposed to read with sincerity to understand the Divine Revelation to mankind, but not to quoteafew verses for the sake of argument for your own agenda.
I wish you to read the Holy Quran with sincere heart, and Allah will guide you to the path that is for the rightly guided people.
Well-loved. 11010 Feb 10 @ 2am